I-Boho cottage kwintsimi ye-lavender kunye ne-sauna kunye nethanga
Siwianka, Mazowieckie, Poland
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMariola
Indlu eLawendowa Siwianka lukhetho olulungileyo kwabo bafuna umzuzwana wokuzola, ukubaleka kubomi bemihla ngemihla okanye abathanda ukuzonwabisa okusebenzayo, kubandakanya i-lavender kunye nabathandi bendalo, ii-ornithologists, i-kayak kunye nabathanda ukuloba, abakhweli beebhayisikile nabakhweli, abathanda ukukhwela amahashe.
Sinikezela ngeendwendwe zethu indlu yonke. Iindwendwe zinokuphinda zisebenzise iseshoni yeeyure ezimbini kwi-sauna kunye nokuhlamba (iseshoni ifakwe kwixabiso lokuhlala). KUBALULEKILEYO: i-sump ingasetyenziswa ukusuka phakathi ku-Epreli ukuya phakathi ku-Oktobha. Unyaka wonke sauna
Kukho igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini. Igumbi lokuhlala linesofa esongwayo, kunye neendawo ezimbini. Indawo yokugqibela yokulala yi-mezzanine enematrasi kabini phantsi.
1 iisofa eziyi-, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
IBoho House ikwindawo yaseLawendowa Siwianka, intsimi yelavender eMazovia. Indawo egqibeleleyo yeholide kunye nempelaveki yokubaleka, ibekwe malunga neekhilomitha ezingama-40 ukusuka eWarsaw. Le ndawo ilungele ukukhuselwa kunye nokuphumla ukusuka kwindawo ephithizelayo yesixeko, ikuvumela ukuba uphumle esifubeni sendalo. Indawo elungileyo yokuhamba ngebhayisekile, ukuhamba ngephenyane, ukukhwela intaba, ukuchola amakhowa, ukukhwela ihashe.
Umbuki zindwendwe ngu- Mariola
Ujoyine nge- 2021 Septemba